29 Pashure paizvozvo Jakobho akafamba, akaenda kunyika yeVokumabvazuva.+ 2 Zvino akatarira, uye nechekoko kwaiva netsime kumafuro uye tarira mapoka matatu emakwai akanga akarara ipapo pedyo naro, nokuti vaiwanzonwisa mapoka acho patsime iroro;+ uye pamuromo wetsime racho paiva nedombo guru.+ 3 Mapoka ose paainge aunganidzwa ipapo, vaikungurutsa dombo racho vachiribvisa pamuromo wetsime, vonwisa mapoka acho ezvipfuwo, vozodzorera dombo racho pamuromo wetsime panzvimbo yaro. 4 Naizvozvo Jakobho akati kwavari: “Hama dzangu, munobva kupi?” ivo vakati: “Tinobva kuHarani.”+ 5 Akabva ati kwavari: “Munoziva Rabhani+ muzukuru waNahori here?”+ ivo vakati: “Tinomuziva.” 6 Akati kwavari: “Anofara here?”+ Ivo vakatiwo: “Anofara. Tarira Rakeri+ mwanasikana wake ari kuuya nemakwai!”+ 7 Akati: “Tarirai, achiri masikati. Haisi nguva yokuunganidza mapoka ezvipfuwo. Nwisai makwai, mundoafudza.”+ 8 Ivo vakati: “Hatibvumirwi kuita kudaro kusvikira mapoka ose aunganidzwa uye vakungurutsa dombo vachiribvisa pamuromo wetsime. Panguva iyoyo tichanwisa makwai.” 9 Achiri kutaura navo, Rakeri+ akasvika nemakwai ababa vake, nokuti aiva mufudzikadzi.+ 10 Jakobho paakaona Rakeri mwanasikana waRabhani hanzvadzi yaamai vake aine makwai aRabhani hanzvadzi yaamai vake, Jakobho akabva aswedera akakungurutsa dombo kubva pamuromo wetsime akanwisa makwai aRabhani hanzvadzi yaamai vake.+ 11 Jakobho akabva atsvoda+ Rakeri, akachema kwazvo, akasvimha misodzi.+ 12 Jakobho akatanga kuudza Rakeri kuti aiva hama+ yababa vake uye kuti aiva mwanakomana waRibheka. Iye akamhanya, akanoudza baba vake.+ 13 Zvino Rabhani angonzwa mashoko pamusoro paJakobho mwanakomana wehanzvadzi yake, akamhanya kunomuchingura.+ Akabva amumbundira, akamutsvoda, akamupinza mumba make.+ Iye akatanga kurondedzera kuna Rabhani zvinhu zvose izvi. 14 Pashure paizvozvo Rabhani akati kwaari: “Chokwadi uri pfupa rangu nenyama yangu.”+ Naizvozvo akagara naye mwedzi wose. 15 Pashure paizvozvo Rabhani akati kuna Jakobho: “Hausi hama yangu here,+ unofanira kundishandira pasina here?+ Ndiudze, Mubayiro wako unofanira kuvei?”+ 16 Zvino, Rabhani aiva nevanasikana vaviri. Mukuru wacho ainzi Reya+ uye muduku wacho ainzi Rakeri. 17 Maziso aReya akanga asingakwezvi, asi Rakeri+ akanga aine chimiro chakanaka nechiso chakanaka.+ 18 Zvino Jakobho aida Rakeri. Naizvozvo akati: “Ndinoda kukushandirai makore manomwe nokuda kwaRakeri mwanasikana wenyu muduku.”+ 19 Rabhani akati: “Zviri nani kuti ndimupe iwe pane kuti ndimupe mumwe murume.+ Ramba uchigara neni.” 20 Jakobho akashanda makore manomwe nokuda kwaRakeri,+ asi akaita semazuva mashomanana kwaari nokuti aimuda.+ 21 Jakobho akabva ati kuna Rabhani: “Chindipai mudzimai wangu, nokuti mazuva angu akwana, uye regai ndirare naye.”+ 22 Rabhani akaunganidza varume vose venzvimbo yacho akaita mutambo.+ 23 Asi manheru acho akatora Reya mwanasikana wake akauya naye kuti arare naye. 24 Uyezve, Rabhani akapa Ziripa+ mushandikadzi wake, kuna Reya mwanasikana wake, kuti ave mushandikadzi wake. 25 Naizvozvo kuzoti ava mangwanani akaona kuti aiva Reya! Naizvozvo akati kuna Rabhani: “Chii ichi chamandiitira? Handina kukushandirai nokuda kwaRakeri here? Saka mandinyengedzerei?”+ 26 Rabhani akati: “Hazvinzarwo munzvimbo yedu, kuroodza mukadzi muduku dangwe risati. 27 Fara+ kwazvo pavhiki yomukadzi uyu. Uchazopiwawo mumwe mukadzi uyu nokuda kwebasa raungandishandira kwemamwe makore manomwe.”+ 28 Naizvozvo Jakobho akaita saizvozvo akafara kwazvo pavhiki yomukadzi uyu, achibva azomupa Rakeri mwanasikana wake kuti ave mudzimai wake. 29 Uyezve, Rabhani akapa Bhiriha+ mushandikadzi wake, kuna Rakeri mwanasikana wake kuti ave mushandikadzi wake. 30 Akabva ararawo naRakeri uyewo akada Rakeri kwazvo kupfuura Reya,+ akamushandira mamwe makore manomwe.+ 31 Jehovha paakaona kuti Reya aivengwa, akabva avhura chibereko chake,+ asi Rakeri akanga asingabereki.+ 32 Reya akava nepamuviri akabereka mwanakomana akabva amutumidza kuti Rubheni,+ nokuti akati: “Nokuti Jehovha aona kutambudzika kwangu,+ pakuti zvino murume wangu achatanga kundida.” 33 Akavazve nepamuviri akabereka mwanakomana, akabva ati: “Nokuti Jehovha ateerera,+ pakuti ndaivengwa saka andipawo uyu.” Nokudaro akamutumidza kuti Simiyoni.+ 34 Akavazve nepamuviri akabereka mwanakomana, akabva ati: “Iko zvino murume wangu achandinamatira, nokuti ndamuberekera vanakomana vatatu.” Naizvozvo akatumidzwa kuti Revhi.+ 35 Akavazve nepamuviri akabereka mwanakomana, akabva ati: “Iko zvino ndichakudza Jehovha.” Naizvozvo akamutumidza kuti Judha.+ Pashure paizvozvo akaguma kubereka.